Soo Saaraha Sariirta Ugu Wanaagsan Iyo Warshad | Medo
Sariirta gogosha leh ee Seoul Dhinaca dhinaceeda, sariirta sariirtu waxay umuuqataa haweeney dhexda u qurux badan. Dhanka hore, labada gadaal waa ka madaxbanaan yihiin mana saameyn doonaan isticmaalkooda. Sariirta cabbirka Boqorka oo leh midabbo madaxa midabkiisu waa sida ranjiyeynta saliidda. Seoul garabka ayaa ka sarreeya. Waqtiyada firaaqada, waxaan fadhiisan karnaa sariirta si aan wax u aqrino ama u sheekaysanno. Waxaa jira barkimooyin waaweyn sariirta dhinaceeda. Taasi waa ku habboon tahay hagaajinta.
Qalab Casri ah Sariiraha jiifka
Shaxda Dhinaceeda 500x400x470mm
Kursi Kali ah 800x860x780mm
Waxyaabaha Dibadda: Dharka cudbiga ah + Maqaarka gaarka ah
Jir: Sariir bir ah
Sariirta sariirta & kursiga dambe: Isku laabashada jir sariirta (birta birta iyo xarig adag)
Qaabka sariirta: Buuxinta Cudbiga Cunugga
Lugta sariirta: Lugta Birta Birta ah
Cidhifyada qurxinta ee daboolka ayaa lagu dhejiyay dharka madow ee mugdiga ah, iyagoo ku daraya dareenka khadka oo muujinaya muuqaal qurux badan. Barkimooyin isbuunyo buuxan oo cufan leh ayaa taageeraya madaxeena iyo garbaha. Waxay umuuqataa mid raaxo leh, oo xiriir muhiim ah la leh saamiga naqshadeeye ee qaabeynta wax soo saarka.
Dharka dharka la isku qurxiyo waa qaab dhismeed aad u yar oo lagu garto cudud gacmeed jaban oo loo qaabeeyey sida ku cad Ergonomics.
Qaabka Mashiinka Kartoonka
Qaab-dhismeedka Birta Kartida oo tayo sare leh.
Naqshad casri ah, raaxo leh, caadi ah, xarrago leh.
Abuuritaanka dareen ah fadhiya daruuraha.
Gogosha sariirta oo buuxda ayaa ku habboon qolalka. Isbuunyada cufnaanta sare ee jirku waxay yareyneysaa dhaawaca.
Suufka jilicsan waa sida maqaarka ilmaha.
Sariirta sariirta, Raaxo, Grand Big
Gudaha barkinta weyn waxaa ka buuxsamaya isbuunyo, aad u jilicsan oo la qaadan karo!
Qaab dhismeedka alwaax Pine waxaa lagu dahaadhay xumbo badan oo polyurethane ah cufnaan-adkeysi badan. gadaal gadaal loogu talagalay plywood-ka dhumucyo kala duwan, oo lagu daboolay xummad badan polyurethane-u-adkeysi sare leh, oo lagu daboolayo jilicsanaanta lagu daray.
Gogosha sariirta oo adag
Qalabka birta ah + xarig adag oo alwaax ah; Naqshad isku laaban Badbaadinta booska, maaraynta habboon, kala-daadinta fudud, keydinta habboon.
Maskaxdeena macaamiisha diiradda saareysa waxay xaqiijineysaa in moodooyinkayaga keydka ku jira iyo sariiraha caado ka ah ay ka raaxo iyo adkeysi badan yihiin alaabooyinka tartamaya. Iyada oo la xakameynayo qashin-saarka sare iyo soosaarka tooska ah, waxaan ka koreynnaa soosaarayaasha kale ee sariirta xagga qiimeyaasha hoose iyo tayada sare.
Sariiraha Cabbirka Boqortooyada ee loo habeeyay
MEDO waxay siisaa macaamiisha sariiraha cabbirka loo habeyn karo si loo daboolo baahiyaha suuqa kala duwan. Marka laga reebo cabbirka, waxaan sidoo kale bixinaa kaydinta naqshadaha farsamooyinka suurtogalka ah ikhtiyaar ikhtiyaari ah.
Istaraatiijiyaddeenna si aan u noqonno adeeg bixiye guri-joogsi keliya ah, awooddeenna iyo awooddeenna qaabeynta sariiraha iyo soo saaristooda ayaa sii kordheysa sannadba sanadka ka dambeeya.
Kooxda khibrada leh iyo shaqaaluhu waxay hubinayaan mid kasta oo ka mid ah alaabada MEDO inay tahay mid tayo sare leh si loo yareeyo qiimaha wicitaanadaada dambe.
Xajmiga Sariirta Qiyaasta oo Buuxda
Xajmiga Sariirta Qiyaasta oo buuxda oo leh sariir dherer lagu hagaajin karo. Khadadka fudud ayaa si fiican uga tarjumaya nuxurka fikradda naqshadeynta ugu yar. Muraayadda madaxu waxay si buuxda ula socotaa 2 barkimooyin waaweyn oo ku daraya qiimeyaal dheeri ah.
Dhamaan macaamiishaadu maheystaan ​​qolal jiif oo waaweyn, waxaad ubaahantahay sariiro cabir boqorad ah si aad qayb uga qaadato suuqa.
MEDO waxay siisaa sariiro cabbir boqorad ah oo keydinaya meel bannaan oo ku habboon meelaha yaryar. Waxay leedahay nashqad cusub oo khafiif ah laakiin adag oo dhinaca adag leh iyo madaxa si loo hubiyo nabadgelyada iyo badbaadinta baahiyaha u baahan.
Bixinta xulasho ballaaran oo kala duwan oo daboolaya, waxaad awoodi doontaa inaad ku qanciso xulashooyinkaaga midabada iyo qaababka dharka iyo maqaarka.
Waxaan haynaa SHAHAADADA AQOONSIGA EE BUKAANKA, Haddii ay jirto ku dayasho, waxaan raadin karnaa mas'uuliyadda.
Shaxda Dhinaceeda 500x400x450mm
Kursi Kali ah / Cusmaaniyiin 800x860x780mm / 500x380x380mm
Waxyaabaha Dibadda: Maqaarka Microfiber
Jir: Qaab alwaax
Sariirta sariirta & kursiga dambe: Jir sariir dabiici ah / isku laablaab sariirta (birta birta iyo xarig adag)
Lugta sariirta: Lugta adag ee qoryaha
Waxyaabaha Dibadda: Dharka Eco
Sariirta sariirta & kursiga dambe: Baal dabiici ah
Qaabka sariirta: Isku laabashada jir sariirta (birta birta iyo xarig adag)
Lugta sariirta: Lugta Birta Kaarboonka
Waxyaabaha Dibadda: Cudbi iyo Dhar linen ah
Shaxda Dhinaceeda 540x400x470mm
Jir: Sariirta birta ee birta ah ee birta ah
Lugta sariirta: Lugaha Madoobaadka Birta Kaarboon Madoow
Hore: Nidaamka Wareejinta leexinta